Kwenzeka ntoni ukuba i-hydraulic oyile yeyunithi yamandla ombane ikhethwe ngokungafanelekanga
Sonke siyazi ukuba i-hydraulic unit iyalingana nomzimba womntu, kwaye ioyile ekhethekileyo ye-hydraulic ye-hydraulic system yeyunithi yamandla alingana negazi lomntu. Ukuba kukho ingxaki ngegazi, liya kuzisa iimeko ezininzi. Namhlanje i-Huai'an P ...
Iyunithi yamandla e-hydraulic (i-HPU) isetyenziswa njengesixhobo sonikezelo lweoyile, edityaniswe kwiisilinda ezininzi zamanzi ngenkqubo yombhobho wangaphandle ukulawula isenzo seeseti ezininzi zezivalo. Itanki yezibaso, impompo yamafutha kunye nezixhobo zefeni zamandla ezizimeleyo zivala umthombo weoyile ...
Kukho imithombo emininzi yentshukumo kunye nengxolo kwinkqubo ye-hydraulic system, kubandakanya iinkqubo zoomatshini, iimpompo ze-hydraulic, iivev hydraulic kunye nemibhobho. Ukungcangcazela nengxolo yenkqubo yoomatshini Ukungcangcazela nengxolo yenkqubo yoomatshini ikakhulu kubangelwa sisixhobo sokuhambisa ...